ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊ အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများ (လက်တွေ့ခန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ)
(Non-control Items ) နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ (မြန်မာ)ကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူလိုပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Non Control Items and Other
Lot.(1) Non Control Item (၆) မျိုး [SD-WAN System ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း] [SD-WAN အသေးစိတ်အချက်အလက်များ]
Lot.(2) Non Control Item and Other (၁) မျိုး [HPC Node Center ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း] [HPC Node Center အသေးစိတ်အချက်အလက်များ]
Non Control Items (၃၆) မျိုး [NCI (၃၆)မျိုး စာရင်း]
Machinery and Equipment (၁၅) မျိုး [ME (၁၅)မျိုး စာရင်း]
Office Equipment (၁၀) မျိုး [OE (၁၀)မျိုး စာရင်း]
Furniture (၁၈) မျိုး [Furniture (၁၈)မျိုး စာရင်း]
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုပြုလွှာပုံစံကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပြီး ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ ( ၂၈ - ၁ - ၂၀၂၁ )ရက် (၁၅:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း တင်ဒါများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် တင်ဒါစပေါ်တင်သွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သော ဘဏ်စာရွက်စာတမ်းများကို ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅။ ဝယ်ယူမည့် ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာရင်းအား ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်း တွင် ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုပြုလွှာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။